हल्दी मास्क FAIR दिनमा निष्पक्ष हुन! - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
हल्दी मास्क Fair दिनमा निष्पक्ष हुन!
घर सुन्दरता छाला हेरचाह छाला हेरचाह oi-Anwesha द्वारा अन्वेषा बरारी | प्रकाशित: शुक्रवार, जुलाई १२, २०१,, १:0:०4 [IST] होममेड फेस प्याकको साथ तत्काल चमक | तत्काल यो फेस प्याक बढाउनेछ। बोल्डस्की
हल्दी एक समय परीक्षण गरिएको सौन्दर्य सामग्री मध्ये एक हो। यो तपाईंको छाला को लागी असंख्य फाइदाहरु छ। हल्दी मास्कले एक्नेलाई निको पार्न सक्छ र तपाईंको छालाको लागि प्राकृतिक एन्टिसेप्टिकको रूपमा काम गर्दछ। यद्यपि यसका अन्य सबै फाइदाहरू भन्दा बढि हल्दी यसको छाला प्रकाशको क्षमताको लागि मूल्यवान छ। यदि तपाईं भारत जस्तो उष्णकटिबंधीय देशको मामला लिनुभयो भने, बहुमत मानिसहरू निष्पक्ष हुन चाहन्छन्। निष्पक्ष छाला लगभग एक आकर्षण हो।
वास्तवमा हल्दी मास्क भन्दा राम्रो छाला पाउन को लागी कुनै राम्रो तरीका हुन सक्छ। यो प्राकृतिक र तपाइँको छाला को लागी बिल्कुल सुरक्षित छ। हिदुली विवाहमा विवाहको रीतिथितिको एक भागको रूपमा हल्दीको युबटन्स पनि प्रयोग गरिन्छ। वास्तवमा हल्डीको पवित्र स्पर्शबिना दुलहीलाई फेरा लिन पर्याप्त मात्रामा शुभ मानिदैन। हल्दीले सुन्दरता बढाउछ भन्ने तथ्यलाई प्रश्न गर्न सकिदैन। यसको आफ्नैमा, हल्दी एक मसला हो जसले छालाको उज्यालोमा परिणाम दिन्छ।
र जब तपाईं हल्का फरक अनुहारको मास्कका लागि अन्य सामग्रीहरूसँग मिसाउनुहुन्छ भने पनि यो एक अत्यन्तै शक्तिशाली छाला प्रकाश पार्ने घटक रहन्छ। यदि तपाईंसँग एक महत्त्वपूर्ण मिति, विवाह वा प्रोम रात एक हप्तामा आउँदै छ भने, प्राकृतिक हल्दी मास्कहरू सात दिनहरूमा निष्पक्ष हुन कोशिस गर्नुहोस्। यी अनुहार मास्क निश्चित समय भित्र परिणाम देखाउनेछ।
निष्पक्ष छाला पाउनका लागि यहाँ केही प्रभावकारी हल्दी मास्कहरू छन्।
कुचिएको हल्दी n सरसों तेल
कच्चा हल्दी अदुवा जस्तै देखिन्छ। हल्दीको बल्बमा रायोको तेल खन्याउनुहोस्। त्यसपछि एक रोलिंग पिन जस्तै भारी वस्तु लिनुहोस् र यसलाई क्रश गर्नुहोस्। अब सरसको तेलमा हल्दीको ताजा रस मिक्स गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको अनुहारमा लगाउनुहोस्। यो एक्लैले तपाईंलाई निष्पक्ष हुन मद्दत गर्दछ।
हल्दी एन मिल्क क्रीम
दूध क्रीमको साथ हल्दी मास्क एक पटक सजिलो छाला पाउनको लागि सजिलो मास्क हो। ताजा दूध क्रीम तपाइँको छाला र यो हल्दी रंग लाई हल्का तुल्याउँछ।
हल्दी एन मह
१ हल्का मह र १/२ चम्मच आल-प्रयोजनको पीठोको साथ हल्दी पाउडर मिक्स गर्नुहोस्। बाक्लो पेस्ट बनाउनको लागि यसलाई थोरै पानीले पिट्नुहोस्। तपाइँको अनुहार र घाँटीमा यसलाई लागू गर्नुहोस् १० मिनेटको लागि यसलाई छोड्नुहोस्। चमकदार छालाको छालाको लागि यसलाई धुनुहोस्।
चन्दनको साथ हल्दी
यदि तपाइँ निष्पक्ष र दाग रहित छाला चाहानुहुन्छ भने तपाईले थप माईल जानु पर्छ। १ टेस्पून ताजा हल्दी पेस्ट लिनुहोस् र यसमा चन्दनको पाउडर थप्नुहोस्। १ टीस्पून दही न थप्नुहोस् र मिश्रणलाई हराउनुहोस्। यो हल्दीको मास्कले एक्ने पनि कम गर्दछ र छालालाई शान्त पार्दछ।
हल्दी n गुलाब पानी
१ हल्का गुलाब पानी हल्दीको पाउडरसँग मिक्स गर्नुहोस्। अब यसमा १/२ चम्मच दही जोड्नुहोस्। मिश्रण पिट्नुहोस् र तपाईंको अनुहारमा लगाउनुहोस्। यो हल्दी फेस प्याक आराम र आफ्नो छाला डि-तनाव हुनेछ।
हल्दी एन केसर
केसर एक मूल्यवान मसला हो जुन काश्मिरको उपत्यकामा फेला पर्दछ। यसले हल्दी जस्तो सुन्दर छालाको रहस्य राख्छ। हल्दी र केही केशर स्ट्रान्ड सँगै पीस गर्नुहोस्। यसलाई १tsp दूधसँग मिलाउनुहोस् र तत्कालको चमकको लागि तपाईंको अनुहारमा लागू गर्नुहोस्।
हल्दी अनुहार स्क्रब
कहिलेकाँही तपाईले आफ्नो अनुहार स्क्रब गर्नु पर्छ मृत छाला कोषहरू हटाउनको लागि। त्यसैले १tsp हल्दी पाउडर १tsp मिल्क पाउडरसँग मिक्स गर्नुहोस्। यसलाई 1tsp दूध र दलिया पाउडर जोड्नुहोस्। यसलाई मिक्स गर्नुहोस् र यस ग्रेनाई मिश्रणलाई अनुहार स्क्रबको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
हल्दी एन मुलतानी मिट्टी
हामी सबैलाई थाहा छ कि फुलरको पृथ्वी वा मुल्तानी मिट्टी एक्ने प्रवण तेलको छालाको लागि उत्कृष्ट छ। समान मात्रामा हल्दी पेस्ट, दूध र मुलतानी मिट्टी मिक्स गर्नुहोस्। यो चिसो फेस प्याक लागू गर्नुहोस् र चम्किलो छालालाई नमस्कार।
बेसन संग हल्दी
बेसन पनि धेरै प्रतिष्ठित एक भारतीय सौन्दर्य उत्पादन हो। बेसन, दूध र हल्दी पेस्ट सँगै मिक्स गर्नुहोस्। अब तपाईको अनुहार र घाँटी यस मिश्रणले घेर्नुहोस्। जब तपाईंले टाँस बन्द गर्नुहुनेछ, मृत छाला कोषहरू र फोहरले तपाईंको छाला फाल्नेछ।
कसरी घरमा ब्लीच गर्ने
कसरी घर अनुहार चमक र निष्पक्ष बनाउन
भगवान शिव नाम एक बाट शुरू
कसरी घरमा varicose नसहरू उपचार गर्ने
कसरी हात र खुट्टाबाट प्राकृतिक र स्थायी रूपमा कपाल हटाउने